Apple ga-emeghe Apple Store ọhụrụ atọ na India tupu njedebe nke 2017 | Esi m mac
Apple ga-emeghe Apple Store ọhụrụ atọ na India tupu njedebe nke 2017
Nyaahụ anyị gwara gị na n'izu a Apple CEO Tim Cook M ga-aga India iji mee ka mmekọrịta nke Prime Minista nke mba ahụ sikwuo ike ma si otú a nwee ike ịpụ ozugbo ma nwee ọnụnọ ka ukwuu na mba ahụ site na ịmepe Storelọ Ahịa Apple ọhụrụ.
Taa, anyị enweela ike ịmụtakwu banyere ihe Apple chọrọ na ahịa India na obere oge ma amaara na ha na-eme atụmatụ imeghe ma ọ bụ ihe na-erughị atọ Apple Stores ọhụrụ dị na isi obodo India. N'ụzọ dị otú a, ndị bi na mba a nwere ike ịnweta ngwaahịa nke apụl apụl na nke a iji nwee ike ịbawanye ahịa na ahịa nke ugbu a dị ka ma ọ bụ karịa na-apụta karịa ndị China.
Dika ekwuru na akuko eweputara OmenalaDaily, Apple ga-adọkpụ ụdọ imeghe ụlọ ahịa atọ na India tupu njedebe nke 2017. Kpọmkwem, otu n'ime ha ga-emeghe na Bangalore, onye ọzọ na Delhi na onye ikpeazụ na Mumbai, ha niile na oge nke ihe ọ bụla na ihe ọ bụla na-erughị ọnwa 18. Nke a ga-ekwe omume n'ihi ọrụ ụfọdụ ndị isi Apple Apple XNUMX na ndị ọrụ ndị ọzọ nwere ọpụrụiche na-emeghe ụlọ ahụ.
Akụkọ ahụ gosikwara na ụlọ ahịa ndị ọhụrụ a ga-enwe mpaghara karịrị puku mita atọ na otu, na-egosi na mgbe Apple batara mba ọhụrụ dịka ụlọ ahịa Apple ahụ, ọ naghị eji ya egwu. Ihe bụ ihe ọzọ, ụlọ ahịa ndị ahụ ga-achọ itinye ego nke ihe ruru nde dollar atọ na ise n'otu n'otu.
Ugbu a Apple na-ere ngwaahịa ya site na ụlọ ahịa ndị ọzọ na ọ bụ ya mere ha ji eme ka mmekọrịta na gọọmentị India sikwuo ike iwu nke ga-ekwe ka mmeghe Storelọ Ahịa Apple anyị gwara gị maka ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple ga-emeghe Apple Store ọhụrụ atọ na India tupu njedebe nke 2017
Ihe na-adọrọ mmasị, taa enwere m ike ihi ụra n'udo ... Daalụ nwoke, m ji gị otu, enweghị m ike ihi ụra n'amaghị banyere India
Olee otú ele Safari akụkọ ihe mere eme na gị Mac?
Polarr Photo Editor dị na mbelata ego na Mac App Store